Adeegii internetka ee gobolada Koonfureed Soomaaliya oo lagu wado inuu dib usoo laabto saacadaha soo socda
arlaadi July 16, 2017 No Comments
Sida ay sheegtay wasaarada boostada iyo isgaarsiinta xukuumada Soomaaliya waxaa meel gabo gabo ah marayo cilad bixinta adeegii internetka ee gobolada koonfurta Soomaaliya oo mudo bil ku dhow hawada ka maqnaa.
Wasiirka Wasaarada Boostada iyo is gaarsiinta ee Xukuumada Soomaaliya Eng Cabdi Canshuur Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in saacadaha soo socdo si buuxdo dib loogu heli doono adeegii internetka.
Maqnaashaha adeega internetka ayaa waxa uu sababay qasaaro xoogan oo dhanka dhaqaalaha ah ayada oo uu sidoo kalena saameyn xoogan ku yeeshay adeegyada shirkadaha ganacsiga, shakhsiyaadka caadiga ah iyo howl maalmeedka.
Cilada internetka ayaa timid kadib markii uu markab jiiray fiilada fibre obtika ee badda hoosteeda Soomaaliya usoo marsiiso internetka. Dowlada Soomaaliya waxa ay dhowaan sheegtay inay wixii hada ka dambeeya ka gaashaaman doonaan ciladaha noocaan ah.